रोग सँग लड्दै इरफानले दिएको त्यो सन्देश ! जस्ले जिवन जिउने प्रेरणा मिल्नेछ – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/रोग सँग लड्दै इरफानले दिएको त्यो सन्देश ! जस्ले जिवन जिउने प्रेरणा मिल्नेछ
रोग सँग लड्दै इरफानले दिएको त्यो सन्देश ! जस्ले जिवन जिउने प्रेरणा मिल्नेछ
आज साढे १२ बजेतिर आएको एउटा खबरले बलिउड मात्र हैन विश्वलाई नै दुखित तुल्यायो । २ वर्ष अघि देखि बिरामी भएका बलिउड अभिनेता इरफान खानले संसार छाडेको कुरा ।
दुई वर्षअघि देखि बिरामी भएका सन् २०१८ मा इरफानले आफूमा बिमारी रहेको थाहा पाएका थिए । उनी आफैले यो खबर शेयर गरेका थिए ।
बिमारीको बारेमा थाहा पाएपछि इरफान उपचारको लागि लण्डन गएका थिए । त्यहाँ झण्डै एक वर्ष रहे र २०१९ मार्चमा भारत फर्किएका थिए । उनले ट्वीट मार्फत सबैलाई बाच्ने प्रेरणा दिईरहन्थे । उनी अभिनयका साथसाथै प्रेरणाको स्रोत भएको भारतीय मिडियाले बताएको छ । केहि समय अगाडी रिलिज भएको अंग्रेजी मिडियममा छोरीको भुमिका निभाएकी राधिका मदानले उनले आफ्नो बिराम कहिले नदेखाएको र आफुलाई सधै प्रेरणा दिईरहेको बताएकी छिन् । उनका केटि ट्वीटबाट पनि त्यो कुरा पृष्टि गर्न सकिन्छ ।
मुम्बईको कोकिलाबेन धिरुभाई अम्बानी अस्पतालमा मंगलबार उनको निधन भएको हिन्दूस्तान टाइम्सले जनाएको छ ।
अचानक स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि खानलाई हिजै अस्पतालको आईसीयूमा भर्ना गरिएको थियो । खानका प्रवक्ताले उनलाई ‘कोलन इन्फेक्सन’ भएको बताएका थिए ।
गत वर्ष खान गम्भिर अस्वस्थ भएर लामो समय लन्डनमा उपचार गराई फर्केका थिए । त्यसबेला उनलाई न्यूरोइन्डोक्राइन ट्यूमर भएको थियो । लन्डनबाट फर्केयता उनी कोकिलाबेन अस्पतालका डाक्टरको निगरानीमा थिए । गत वर्ष उनले एउटै मात्र फिल्म ‘अंग्रेजी मिडियम’ मा काम गरेका थिए । सो फिल्ममा काम गर्दा पनि उनको अवस्था ठीक थिएन ।
खानकी आमा सईदा बेगमको पनि हालै मात्र निधन भएको थियो । लकडाउनको कारण इरफान आफ्नी आमाको अन्तिम यात्रामा पनि उपस्थित हुन सकेका थिएनन् । उनले भिडियो कलमार्फत आमाप्रति श्रद्धान्जली प्रकट गरेका थिए ।
कुशल अभिनयका लागि चिनिएका इरफानले सलाम बम्बे, मकबुल, पान सिंह तोमर, द लन्चबक्स, हैदर, गुन्डे, पिकु, तलभार लगायत फिल्ममा अभिनय गरेका छन् ।
लद्दाख घ,टनाप्रति संयुक्त राष्ट्र चिन्तित, यु,द्धको भय,भारतीय २० सैनिकको मिर्तु,दुवै देशले हतियार सहित लद्दाख पठायो सैनिक
स्याङ्जामा दुई महिलासहित १६ जना सुरक्षाकर्मीमा पनि देखियो कोरोना संक्रमण